'Aabe wuxuu igu yiri waxaan u soconnaa dhakhtarka ilkaha, balse dib iiguma soo noqon' - BBC News Somali
Hayley, oo hadda 55 jir ah, ayaa soo martay caruurnimo dhib badan - mararka qaar waxay qol la seexan jirtay haweeney jirkeeda ka ganacsan jirtay oo maamulka dowladda hoose uu la soo dejiyay. Waxaa sidoo kale la geeyay goob lagu xiro carruurta iyada oo aan geysan wax dambi ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxay xusuustaa wakhtigii ay ku soo qaadatay xaruntaasi xannaanada carruurta ee Plymouth, waxayna sheegtay in xilligaasi ugu ahaa kii ugu farxada badnaa ee soo mara caruurnimadeedii - waxayna sharraxeysaa khibraddii ay ka heshay nolashaasi oo ka caawisay in ay mustaqbal yeelato.
Aabe wiilkiisa maxkamad ula tiigsanaya arrin uu wakhti dheer u bareeri waayay
Aabe gabadhiisa ku khasbay iney u lugeyso 8 kiiloo mitir
'Eedadeey ayaa igaraaci jirtay oo cunndada iga celin jirtay'
'Wuxuu iga tagay isagoon imacsalaameyn'
Laba haween ah ayaa soo baxay waxa ayna xafiis ila galeen aabahayn, anigana waxaa la igu yiri kursigan ku fariiso. Ka dib aabe ayaa ii yimid wuxuuna igu yiri 'halkan igu sii sug suuliga ayaan aadayaaye'.
'Waxay ila noqotay in aan dhintay oo aan galay janno '
Shaqaalaha dhammaantood waxa ay ii ahaayeen "eedo" iyo "adeer" waxaana halkaasi aan ka helayay cunno iyo ciyaar aad u badan.
'Waxaan dhex seexday xabsi'
'Waxaan bartay dhammaan haweenka jirkooga ka ganacsada'
Maadaama uu meel cidla ah iiga tagay aniga oo carruur ah waxaa ii soo baxday in waxba aysan naga dhaxeyn, sidaa awgeed waxaan go'aansaday in mar dambe aanan dib ula kulmin.
'Nasiib darro ayay ahayd in aan soo maro carruurnimada noocaasi ah'